3 Qodob oo Muhiim ah Lamaanaha is Jecel | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada 3 Qodob oo Muhiim ah Lamaanaha is Jecel
3 Qodob oo Muhiim ah Lamaanaha is Jecel
Bulsha:- Xariirka Jaceylka waxaa wanaagsan inaad u kool kooliso Sidii Carudkaaga oo kale kana ilaaliso waxyaabaha caqabadaha ku noqon kara taasooy muhiim tahay inaad waqti waliba ku ilaaliso Xiisaha.
Hadaba Shabakada warka.aduun.com waxay kusoo bandhigeysaa Sedex qodob oo Muhiim ah inaad iska ilaaliso si aad horumar uga gaarto Xariirkaasi Jaceylkaa.
1. Xaq dhowr la’aanta
Hadii Lamaankaagu uu xaq dhowr la’aan kaa arko waxaa hubaal ah inuu ku niyad jabayo xariirkaas jaceyl kuna abuurayo cadaawad waarta waxaase fiican inaad xaq dhowrto jaceylkaaga si farxada aad dacalka uga dhagtaan.
Shakiga oo ah wax qofka bini adamka ku beerma isla markaana dhunsha kalsoonida ayaa in badan oo inaga mid ah waxay la tacaalayaan sidii u ogaan lahaayeen sirta ay aaminsanyihiin iney ka qarsoontahay waxaana dhaawac kaaga imaan kara dhan walbo.
3. Isla weynida
Hadii aad isla weyntahay waxaad noqoneysaa ruux isaga dhan aanan u qalmin Bini aadamka koonkan saaran waxaase hubaal ah inaad ku seeri doonto jaceylka aad markaasi majaraha uheysid.
Haidi aad ku Dadaasho sedexdaan iyo kuwa kaloo kamuhiimsanba waxaa hubaal ah inaad ka Guul gaarayso Xariirkaasi , inta badan warka.Allshukaansi.com wuxuu Garab istaagsanyahay Maskaxdaada Akhristoow hana Baqiilin Fikirkaaga Mahadsanid.